China Glycine Mugadziri uye Mutengesi | Haitian
CAS Kwete.: 56-40-6
Yakajairwa: USP, BP, EP, FCC, E640
Rinoshanda uye chikumbiro: Flavoring, Anti-oxidant, preservative, chikafu chirungiso, etc.
kurongedza:25kg / bhegi（ngoma） ，600kg / bhegi, imwe kurongedza maererano nemirairo
Makristani machena kana crystalline poda
Crystalline zvidimbu kana crystalline upfu
Munhu akaidza (%)
Kurasikirwa pakuomesa (%)
Zvakasara pamusoro kuvesa (%)
Basa: Glycine, inozivikanwawo seaminoacetic acid, inonyanya kushandiswa pakunaka.
Kunaka uye alanine zvinoshandiswa muzvinwiwa zvinodhaka. Kuwedzera: 0.4% yewaini, 0.2% yewhisky, uye 1.0% yemashampeni. Zvimwe, senge upfu muto, wedzera nezve 2%; chikafu chakakwenenzverwa 1%. Inogona kushandiswa kurunga sosi nekuti inogona kuravira senge shrimp uye cuttlefish kune imwe nhanho.
Iyo ine imwe yekuvharira mhedzisiro pakuberekwazve kweBacillus subtilis uye E. coli. Naizvozvo, inogona kushandiswa senzira yekuchengetedza zvigadzirwa zve surimi, nzungu ruomba, nezvimwewo, iine huwandu hwekuwedzera hwe1% kusvika 2%.
Buffering mhedzisiro Glycine izwitterion ine amino uye carboxyl mapoka, saka ine yakasimba buffering zvivakwa. Inogona kukanganisa kuravira kwemunyu nevhiniga. Iyo yekuwedzera huwandu i0.3% ～ 0.7% yezvigadzirwa zvemunyu uye 0.05% ～ 0.5% yezvigadzirwa zvemakwenzi.
Antioxidant athari (kushandisa simbi chelation yayo) yakawedzerwa kune cream, chizi, uye majarini inogona kuwedzera sherefu hupenyu ne3 kusvika ku4 nguva. Kuti ugadzikise mafura mune zvakabikwa zvinhu, 2.5% glucose uye 0.5% glycine inogona kuwedzerwa. Wedzera 0.1% kusvika ku0,5% yeupfu hwegorosi pama noodles epakarepo, ayo anogona zvakare kushandiswa pakuvira. Mishonga inoshandiswa seantacid (hyperacidity), mhasuru yekushomeka kwekurapa mumiririri, mishonga yekudzivirira, nezvimwewo.
Inoshandiswa seyakagadziriswa, inoshandiswa mukugadzirira kwetissue tsika yepakati, mhangura, goridhe uye kuongorora kwesirivheri, inoshandiswa mukurapa kurapa myasthenia gravis uye inofambira mberi mhasuru atrophy, hyperacidity, chronic enteritis, hyperprolineemia muvana, nezvimwewo chirwere.
Kurapa kwemyasthenia gravis uye inofambira mberi mhasuru atrophy; kurapwa kwe gastric hyperlipidemia, chisingaperi enteritis (inowanzo shandiswa pamwe chete neantacids); inosanganiswa neasipurini, inogona kudzora kutsamwa kwayo kusvika mudumbu; kurapwa kwevana vane hyperprolineemia; sezvo Iyo nitrogen sosi yekugadzira isiri-yakakosha amino acids inowedzerwa kune yakasanganiswa amino acid jekiseni.
Muindasitiri yemishonga, inogona kushandiswa semushonga wekudzidza kweanorwisa hutachiona uye biochemical amino acid metabolism;
Inoshandiswa se chlortetracycline buffer, anti-Parkinson's chirwere chinodhaka L-dopa, vhitamini B6, uye threonine nemamwe amino acids;
Inoshandiswa seamino acid zvinovaka muviri kuputirwa;
Inoshandiswa senge yakasvibirira cephalosporin; thiamphenicol zvenguva; synthetic imidazole acetic acid yepakati, nezvimwe;
Inoshandiswa seye cosmetic mbichana zvigadzirwa.